Oktobra 2018 - Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo - FJKM Québec - Canada
Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra
“Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo”
Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Any am-piangonana, any an-tokantrano, any anaty fiarahamonina rehetra any dia ventesina hatrany ny voambolana hoe “rariny sy hitsiny” satria mahatsara antsika izany.
Raha mikasika ity lohahevitra ity dia indreto misy teboka vitsivitsy hifampizaràna amintsika:
Ny fanaovana ny “rariny” sy ny “hitsiny” dia fanarahana ireo fenitra napetraky ny fiaraha-monina, entintsika mifandray sy mifanerasera amin’ny hafa. Ny fahaizantsika miaina manaraka ireo fenitra ireo no hilazana fa mahay miaina isika. Raha sanatria kosa ka mifanohitra amin’izany fenitra izany ny ataontsika dia tsy marina isika amin’ny fifandraisana amin’ny hafa.
Sehatra roa no tena hitaoman’ny Soratra Masina antsika hanaovana ny “rariny sy ny hitsiny” amin’ny ankapobeny:
Fifandraisana ao anivon’ny fanambadiana (Hosea 2: 21): Fanambadiana maharitra, tsy miovaova, feno fitiavana sy hanjakan’ny famindrampo no atao hoe “tokantrano marina sy mahitry” eo antrehan’ny Tompo.
Fifandraisantsika amin’ny Tompo (Salamo 119: 80): Ny fanarahantsika ny Tompo amin’ny rariny sy ny hitsiny dia ny fankatoavantsika ny sitrapony. Ny fanatanterahan ireo asa fanompoana niantsoana antsika. Ny fikarakarantsika ny tenantsika sy ny manodidina antsika izay zava-boarin’ny Tompo avokoa. Ny fahaizantsika mikolokolo sy mampiasa ireo fahasoavana nomeny antsika, sns, dia endriky ny fanaovantsika ny rariny sy ny hitsiny eo anatrehan’Andriamanitra.
Ny adidintsika mpino dia ny hapanjaka ny rariny sy ny hitsiny eto amin’izao tontolo izao araka ny Soratra Masina hoe “Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana … mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay” Isaia 9: 6.
Ho volana hijroantsika vavolombelona hapanjaka ny “Rairiny” sy ny “Hitsiny” anie ity volana nomen’ny Tompo antsika ity